Amin’ny fonao rehetra
“Ary hitady Ahy ianareo, dia ho hitanareo Aho, raha katsahinareo amin’ny fonareo rehetra” Jer. 29:13
Maro n miankina amin’izay lazaina fa fanantenana tsy misy fanorenana marina. Tsy voadio ny loharano, araka izany dia tsy madio ny rano mikoriana avy ao amin’io loharano io. Diovy ny loharano, dia hadio ny rano mikoriana avy aminy. Raha mahitsy ny fo dia ho marina avokoa ny teninao sy ny fitafianao ary ny asanao.
Tsy te hanala baraka tafahoatra ny Tompoko aho amin’ny fanekena fa ny olona tsy mivaky loha, tia lalao, tsy mivavaka dia antsoina hoe kristianina. Tsia, ny kristianina dia mandresy ireo zavatra malaky mahazo azy, ireo filany. Misy fanafody ho an’ny fanahy mararim-pahotana. I Jesosy io fanafody io. Mpamonjy sarobidy! Ampy ho an’ny malemy indirndra ny fahasoavany; ary ny matanjaka indrindra dia tsy maintsy manana ny fahasoavany koa raha tsy izany dia ho very.
Hitako ny fomba hahazoana io fahasoavana io. Mandehana mankao amin’ny efitranonao , ary rehefa irery ao ianao, dia mitalahoa amin’Andriamanitra hoe: “Amorony fo madio aho Andriamanitra ô, ary havaozy hiorina marina ny fanahiko ato anatiko” Ps. 51:10. Aoka ho feno hafanam-po, aoka ho tsotra. Manampy betsaka an’i Jakôba, mitoloma amin’ny fivavahana. Mitalahoa mafy. Jesosy, tao an-jaridaina, nipatrapatraka ra ny dinitra; tsy maintsy manao ezaka ianao. Aza mandao ny efitranonao raha tsy efa mahatsapa ho matanjaka miaraka amin’Andriamanitra ianao; ary miambena avy eo, ary tahaka ny fotoana iambenanao sy ivavahanao no hahafahanao miazona ireo fahotana malaky mahazo ireo ho ambany, ary dia afaka hiseho aminao ny fahasoavan’Andriamanitra.
Nandrara Andriamanitra fa tsy tokony hitsahatra hampitandrina anareo aho. Ry namana tanora, katsaho amin’ny fonao rehetra ny Tompo. Manatona amin’ny zotom-po, ary rehefa tena tsapanao fa very ianao rehefa tsy misy ny fanampian’Andriamanitra ka mangetaheta Azy ianao toy ny diera mangetaheta maniry ny rano amin’ny sakeli-drano, amin’izay ny Tompo dia hanatanjaka anao faingana. Amin’izay ny fiadananao dia hihoatra ny fahatakarana rehetra. Raha manantena famonjena ianao, dia tsy maintsy mivavaka. Italahoy Andriamanitra mba hiasa fanavaozana tanteraka ao aminao, mba hitoeran’ny vokatry ny fanahiny ao aminao (...). Tombontsoa ho an’ny kristianina ny mankafy ny fihetsehana lalin’ny fanahin’Andriamanitra. Fiadanana mamy avy any an-danitra no hanenika ny fisainana, ary ho tianao ny hisaintsaina ny momba an’Andriamanitra sy ny lanitra. Hiravoravo amin’ireo fampanantenana be voninahitry ny Teniny ianao. Saingy fantaro aloha fa vao nanomboka ny hazakazaka kristianina ianao.